Modern ezihlanzekile futhi amazinga tebuciko abeke ukubukeka kwethu eziningi izidingo. Lokhu kunjalo, ikakhulu ukuhlanzeka emzimbeni kweqiniso, ukuyikhulula kusuka kunoma iyiphi izimila ngokweqile. Manje kungamukelwa, ukuthi le ntombazane yayingakaze imilenze enoboya noma emakhwapheni, futhi ngokuvamile indawo ye bikini , kakhulu, kuba efiselekayo ukugcina njengoba yayinjalo. Ngokuqondene namadoda, esifubeni yene kakhulu akusho likhanga. Ngenxa yokuthi abaningi ababuka zavela amadoda, kufaka phakathi abaculi, abadlali, futhi, ngizama ukuba ahlanze umzimba wonke engadingekile.
Hairiness izitho ezithile emzimbeni ezihambisana ne izitho zomzimba womuntu, nezinguquko ama-hormone ubudala. Ukuze sisuse izinwele izintokazi kukhona izinsingo zokushefa ezilahlwayo, wax emapheshana, kodwa kuyindlela elula kunazo kuyaqapheleka njengoba ukhilimu izinwele ukususwa. Uma kuqhathaniswa namanye izindlela, okhilimu abanjalo eziningi eziwusizo:
Ukusebenzisa insingo, ukusikeka akunakugwenywa, ikakhulukazi izindawo ezinengozi enjalo nzima njengoba ikhwapha noma imbilapho. Futhi, izikhathi eziningi, aphucule, ngokushesha bayokhula futhi. imikhiqizo Muhle ziphephile ngokuphelele ngokuya umonakalo isikhumba. Ngesikhathi esifanayo, izinwele ukususwa ukhilimu ebhubhisa molecule izinwele yi-keratin ngokusebezisa omusha ngamunye eziba yilo izacile futhi kancane ebonakalayo, okuyinto kusiza phambili ekulweni kwabo.
izimonyo okunjalo angasetshenziswa ukususa emilibeni izinwele ngenhla udebe noma esilevwini, ngokuvamile abesifazane yale nkinga.
Cream izinwele ukususwa, ngaphandle uma kubangela ukusabela iguliswa, kuba kobuhlungu, kuyilapho behlukile isikhumba okufanayo wax emapheshana ngempela kubuhlungu ngempela futhi kabuhlungu.
Ngemva ukushefa, isikhumba ngokuvamile kuba ukuqubuka, ukucasuka ngisho pustules. Ngemva umzimba ukhilimu ihlala ihlanzekile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma ngokushesha avele obala ukuba isesimeni esihle. Kafushane, nginikela ukhilimu for depilation - №1 Umsizi ekubhekaneni nezindaba eziningi ezibucayi. Futhi amadoda ayenaye, futhi, ozama "abambisane".
Nakuba lezi imikhiqizo yezimonyo ekhiqizwa ngesisekelo a hypoallergenic, ezinye izingxenye kungabangela ukungabekezelelani ngabanye. Ngakho ngaphambi kokuba uqale ngokusebenzisa i-ayisikhilimu, kufanele uhlole emzimbeni wakho allergochuvstvitelnost.
Nomaphi lapho isetshenziswa ngoba izinwele ukususwa ukhilimu Izibuyekezo zonke kuvumelana ngephuzu elilodwa: ke akunakusetshenziswa onikezwe emibi noma into yesikhumba obonakele ngaphezulu. Afakwe amakhemikhali ekwakhiweni angase adle izilonda, ezibangela izifo zesikhumba. Ngoba kufanele uqaphele futhi baqaphe.
Ngaphambi kokufaka isicelo ukuze ushawa noma ubhavu: ukhilimu kumele kube ethinte ehlanzekile kahle sula isikhumba. Kufanele zisetshenziswe kodwa hhayi wagcoba ku izembozo.
Kungakhathaliseki izinwele ukususwa ukhilimu for amadoda noma abesifazane isetshenziswa, landela imiyalelo emuthini esikudinga ngempela. Kubaluleke ngokukhethekile ukuba athobele isikhathi - kusho Isikhumba asikwazi Ungeqisi, kungenjalo kungase bashe noma ezinye abantu basabele ngendlela embi.
Susa ukhilimu kanye izinwele kangcono hhayi lokwela enikeziwe, futhi isipanji abavamile - inqubo ithatha isikhathi esincane, kodwa umphumela kuyoba okufanayo.
Kodwa ngemva kwezinsuku ezimbalwa zomuthi kungcono ukugeza isiponji esithambile futhi isikhumba ngaphandle bezihlikihla, kanye noma kunjalo hhayi ukusebenzisa Scrubs umzimba - isikhumba ebucayi kakhulu, futhi zonke izinhlobo anolaka isinyathelo mechanical kuyoba okungathandeki kuye.
Musa ngokushesha ngemva depilation avele ilanga, kungcono nge izinsuku ezimbalwa tan ukulinda.
ukusetshenziswa avamile iyadingeka ukufeza umphumela oyifunayo.
Njengoba ngasho Heroine we ifilimu abadumile, ubuhle ngempela, amandla esabekayo, ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi tricks eziningi kudingeka ukuba silondoloze ke. Believe me, kuyakufanelekela it!
Indlela ukunciphisa umzimba ngosizo soda lemon? Soda ulamula: ukubuyekezwa kanye Imiphumela (izithombe)
Ukubuyekeza mayelana nochungechunge oluthi "Kyosem Sultan": isakhiwo, abaqondisi, abadlali kanye nezindima
"Arla Natura" ushizi: ikhalori okuqukethwe, izakhiwo ezifiselekayo. ushizi Danish Arla Natura
Sodium formate: ukukhiqizwa, izakhiwo kanye nezicelo